Deegaanada Puntland oo maanta lagu xusayo aasaaskii dowladda Puntland & Madaxweyne Denni oo….
GAROWE(P-TIMES)- Waxaa maanta si weyn looga xusayaa deegaanada kala duwan ee Puntland xuska sanad guuradii kasoo wareegtay markii la aas aasay dowladda Puntland, taas oo ku beegan kowda August ee sanadkii 1998dii.
Ciidamada iyo shacabka ayaa si weyn iskugu diyaariyey ka qayb galka munaasibadani oo ah mid balaadhan lagu qabanayo deegaano badan oo kamid ah Puntland.
Madaxda dowladda ayaa iyaguna ka qayb gali doona munaasibada xuska dhismaha Puntland, waxaana saaka ka socda magaalooyinka waa weyn ee Puntland dabaal dagyo lagu muujinayo sida ay shacabku u taageersan yihiin dowladdooda.
Munaasibadaha ka dhici doona Puntland ayaa waxaa lagu milicsan doonaa sooyaalka taariikhdii laga soo maray dhismaha Puntland, waxaana magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku sugan madaxda dowladda intooda ugu badan kuwaas oo shacabka lasoo wadaagay hambalyada kowda August.
Sidoo kale caawa ayaa qorshuhu yahay in magaalada Gaalkacyo lagu qabto munaasibad balaadhan oo ay qayb ka yihiin madaxda dowladda, waxaana ay ka jeedin doonaan munaasibadaasi khudbado kala duwan.